Omeo ny traikefa vahiny tsara indrindra ho an'ireo mpanjifanao manofa vakansy
Ny zavatra niainan'ny vahiny dia ny fametrahana apetraka amin'ny fanantenana, ary avy eo manantanteraka ireo andrasana ireo. Ny vahiny dia mamandrika trano sy trano fialantsasatra avy amin'ny mpampiantrano amin'ny alàlan'ny fantsona maro samihafa - tranokala lisitra, OTA, na mivantana amin'ny Internet, an-taroby, na amin'ny alàlan'ny mailaka
Ny vahiny tsirairay dia efa nandalo faritra samihafa tamin'ny fizotry ny famandrihana izay takian'ny mpampiantrano, na izany aza, sarotra ho an'ny mpampiantrano ny manavaka ny zavatra niainan'ny vahiny arakaraka ny pitsopitsony amin'ny famandrihana.
Ny OTA sasany dia mety tsy mandefa antsipirian'ny fifandraisana ampy ho an'ny vahiny, amin'ny tranga hafa dia mety voaangona nefa tsy misy antenaina apetraka amin'ny fepetra manaraka. Ny fitarainana dia afaka manomboka herinandro vitsivitsy alohan'ny hahatongavanao rehefa mangataka amin'ny vahiny ianao handoa ny vola azo antoka, na andro vitsivitsy mialoha raha mbola tsy nozaraina tamin'izy ireo ny torolàlana momba ny fizahana.
Ny fitazonana ny fampahalalana izay efa azon'ny vahiny tsirairay avy ary ny fahazoana antoka fa mandray ny vaovao marim-pototra amin'ny fotoana mety alohan'ny hahatongavany, mandritra ny fijanonany, ary ny fizahana aorian'ny famoahana dia mety ho olana goavana. Raha tsy vita tsara dia tsy afa-po ny vahiny, ary hita taratra amin'ny naoty sy fanamarihana momba ny fanolorana nataonao.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's Experience Experience Solution manampy?
Zeevou dia mamela anao handrindra ny fanodinana ny famandrihanao, mandray anjara amin'ny traikefa ananan'ny vahiny ambony. Amin'ny alàlan'ny fiantohana fa ny dingana tsy maintsy vitan'ny vahininy alohan'ny hanomezana azy ny fidirana amin'ny trano dia voalaza mazava tsara amin'ny fotoana hidiran'ny famandrihana, apetraka ny fanantenana ary mahazo toky ny vahiny fa manana marika matihanina izy ireo.
Aorian'ny fahavitan'ireo dingana fanamafisana ny famandrihana izay manapa-kevitra ny hampavitrika anao (fanangonana ny antsipirian'ny vahiny, fandoavam-bola, petra-bola fiarovana ary fitsirihana ny mpitsidika), ampandrenesina ny vahiny avy eo fa voamarina ny famandrihany. Manomboka amin'izay fotoana izay dia afaka manomboka manomana azy ireo amin'ny fijanonany ianao, amin'ny fizarana boky torolàlana momba ny trano miaraka amin'ny fampahalalana momba izay antenain'izy ireo amin'ny trano na antsipirian'ny orinasa eo an-toerana sy ny toerana manintona izay mety hahaliana azy ireo.
Akaiky kokoa ny fahatongavanao, azonao atao ny mandeha ho azy ny fandefasana ny torolàlana momba ny fizahana arakaraka ny tetiandro manokana, ao anatin'izany ny fahaizana mampifandray torolàlana fanamarinana isaky ny fananana. Amin'izany fomba izany, ny vahiny dia tsy mahatsiaro ahiahy momba ny fomba hahazoan'izy ireo miditra. Mba hanomezana toky bebe kokoa azy ireo ny haavon'ny serivisinao dia azonao atao, ohatra, ny mampiasa ny iray amin'ireo maodely maodely omena ho isan'ny an'ny onboarding. Io dia hahafahanao manamarina raha faly amin'ilay vahiny ilay vahiny na raha misy zavatra takian'izy ireo azonao omena azy ireo.
Miaraka amin'i Zeevou, tsy voafetra ny safidy. Raha raisina ny fitsipika mifehy tanteraka sy ny modely miovaova miovaova dia azonao atao ny manangana traikefa vahiny miankina amin'ny fahitanao ny tokony ho izy!